Wararka - Ku maamul baarkinka AI IOT
Ku maamul baarkinka AI IOT
Iyada oo horumarka degdega ah ee AI, Natiijooyinka codsigeeda tignoolajiyada ayaa lagu dhaqmay warshado badan oo dhaqaalaha qaranka ah. Sida AI+home,AI+Security,AI+Caafimaadka,AI+waxbarashada iyo wixii la mid ah. TBIT waxay leedahay xalka ku saabsan nidaaminta baabuurta la dhigto AI IOT, fur codsiga AI ee berrinka e-baaskiilada la wadaago ee magaalooyinka. U suurtageli e-baaskiil si ay u gartaan baarkin-go'an iyo baarkin jiho isku mar ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay xasillooni xoog leh iyo qiimo jaban, kaas oo xaliya ilaa xadka ugu badan dhibaatooyinka qaybinta random iyo kormeerka adag ee la kulmay magaalooyinka.
Xaalada hadda ee baarkinka magaalada
Baarkinka baaskiilada elektaroonigga ah ayaan si wanaagsan loo nidaamin, taasoo caqabad ku ah deegaanka magaalada iyo dhaqdhaqaaqa maalinlaha ah ee dadka deggan. Sannadahan, tirada wadaagga baaskiilka elektaroonigga ah ayaa aad u kordhaysa. Si kastaba ha noqotee, xaaladda goobaha baarkinka ma fiicna, meelaynta baarkinku maaha mid sax ah oo ku filan, calaamaduhu waa eex. Dib-u-dhacii e-baaskiilku soo noqday, ama xitaa e-baaskiilku waxa uu ku soo duulay jidka indho la'aanta ah, way dhacdaa wakhti ka waqti. Waqtigan xaadirka ah, dhibaatooyinka maamulka baabuurta la dhigto ee magaalooyinka kala duwan ee waddankeena waa mid aad u soo kordhaya. Maaraynta e-baaskiilku maaha mid sax ah oo ku filan, maaraynta gacantana waxay u baahan tahay xoog badan iyo agab agab, taas oo aad u adag.
Codsiga ku saabsan AI ee goobta baabuurta la dhigto
Xalka ku saabsan ku habaynta baarkinka AI IOT ee TBIT wuxuu leeyahay faa'iidooyinkan: Isdhexgal caqli sare leh, waafaqid xooggan, miisaan wanaagsan. Waxay qaadi kartaa nooc kasta oo la wadaago baaskiilada elektaroonigga ah. Ku xukun booska iyo jihada baaskiilka elektaroonigga ah adiga oo ku rakibaya kamarad caqli badan dambiisha hoosteeda Marka isticmaaluhu soo celiyo baaskiilka elektaroonigga ah, waxay u baahan yihiin inay baaskiilka elektiroonigga ah dhigaan goobta baarkinka ee loogu talagalay waxaana loo oggol yahay e-baaskiilka in lagu soo celiyo ka dib marka si toosan loo dhigo wadada. Haddii baaskiilka loo dhigo si aan kala sooc lahayn, isticmaaluhu si guul leh uma soo celin karo. Waxa ay gebi ahaanba ka fogaataa ifafaalaha elektaroonigga ah ee saameeya marinnada lugaynta iyo muuqaalka magaalada.
TBIT's AI IOT waxa ay leedahay processor-ka isku xidhka neerfaha ee ku dhex dhisan, iyada oo la adeegsanayo algorithms-ka barashada qoto dheer, tignoolajiyada sirta aragtida AI ee waqtiga-dhabta ah ee baaxadda weyn. Waxaa loo isticmaali karaa goob kasta. Waxay xisaabin kartaa sawirada gelitaanka wakhtiga dhabta ah, si sax ah oo baaxad weyn, waxayna si dhab ah u gaari kartaa meelaynta saxda ah ee mootooyinka, bar-go'an iyo baarkin jihada, xawaaraha aqoonsiga degdega ah iyo aqoonsiga sare ee saxnaanta.
TBIT waxay hogaamisaa horumarka joogtada ah ee warshadaha ee tignoolajiyada
Ka dib markii la soo saaray tiro tikniyoolajiyada gees-goynta ah sida biraha wadada Bluetooth-ka, meelaynta saxda ah ee saxda ah, baarkinka tooska ah, iyo baarkinka bar-go'an ee RFID, TBIT waxay sii waday inay hal abuur yeelato oo ay sii wado inay hore u socoto, iyo R&D AI IOT iyo tignoolajiyada baarkinka caadiga ah Waxaa naga go'an inaan xallino mashaakilaadka shaqo ee warshadaha la wadaago, jaangooyna nidaamka baarkinka ee wadaaga baaskiillada elektaroonigga ah, iyo abuurista muuqaal nadiif ah oo nadiif ah oo magaalada ah iyo jawi isu socod ah oo xadaarad iyo habsami leh.
Iyadoo wajaheysa rajada suuqa ee ballaaran ee wadaagga baaskiillada elektaroonigga ah, TBIT waa shirkaddii ugu horreysay ee warshadaha si ay u adeegsato tignoolajiyada AI qeybta wadaagga baaskiillada elektaroonigga ah. Xalkani hadda waa xalka kaliya ee suuqa ka jira ee xaliya mashaakilaadka go'an iyo kuwa jihaynta labadaba. Suuqani waxa uu leeyahay awood, TBIT waxa ay rabtaa in ay kula shaqeyso.
TBIT waxay ahayd magac lagu kalsoon yahay warshadaha labada lugood leh muddo 14 sano ah. Maanta, waxaan si sharaf leh ugu adeegnaa in ka badan 300 oo macaamiil dalka oo dhan ah.
1501-1508 unug,15F,SDGI Dhismaha B, Maya. 2 Kefeng Rd.518000, Beerta Sayniska iyo Tignoolajiyada, Degmada Nanshan, Shenzhen, Shiinaha.